Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.5 azo idirana
Sarotra ho an'ny mpikaroka ny mahazo ny data izay voarakotry ny orinasa sy ny governemanta.
Tamin'ny May 2014, ny Masoivoho Amerikana misahana ny Fiarovam-pirenena dia nanokatra toeram-pifaneraserana iray tany ambanivohitr'i Utah niaraka tamin'ny anarana tsy fantatra, ny National Intelligence Community Comprehensive National Cyberecurity Data Data Center. Na dia izany aza, ity foibem-pifaneraserana ity, izay fantatra amin'ny hoe Utah Data Center, dia voalaza fa manana fahaizana mahagaga. Ny tatitra iray dia manambara fa afaka mitahiry sy manara-maso ny endri-pifandraisana rehetra izy, anisan'izany ny "ny votoatin'ny mailaka manokana, ny antso an-tariby, ny fikarohan'i Google, ary ny karazana data manokana momba ny fiara, , ary ny lasopy lasopy hafa "digital" (Bamford 2012) . Ankoatra ny fampitomboana ny ahiahiny momba ny toetra marevaka amin'ny ankamaroan'ny vaovao voarakitra anaty rakitra lehibe, izay horesahina etsy ambany, ny Utah Data Center dia ohatra faratampony amin'ny loharanom-baovao azo antoka izay tsy azon'ny mpikaroka intsony. Amin'ny ankapobeny, loharanom-baovao maro be izay mety ilaina dia voafehy sy voafetra ho an'ny governemanta (ohatra, angona hetra sy angona fanabeazana) na orinasa (ohatra, fangatahana fitadiavana milina sy meta-data). Noho izany, na dia misy aza ireo loharanom-baovao ireo dia tsy misy ilàna azy ireo noho ny tanjona amin'ny fikarohana ara-tsosialy satria tsy azo idirana izy ireo.
Raha ny zavatra niainako dia maro ireo mpikaroka miorina amin'ny oniversite no tsy mahatakatra ny loharanon'io tsy azo idirana io. Tsy azo idirana ireo tahirin-kevitra ireo fa tsy ny olona ao amin'ny orinasa sy ny governemanta dia adala, kamo, na tsy miraharaha. Fa kosa, misy lalàna saro-bahana, raharaham-barotra, ary sakana ara-pihetseham-po izay misakana ny fidirana amin'ny data. Ohatra, fifanarahana fifanarahana amin'ny serivisy sasany ho an'ny tranonkala dia mamela ny angon-drakitra ampiasain'ny mpiasa na hanatsara ny serivisy. Noho izany, ny fampisehoana fizarana data dia mety hampiseho ny orinasa amin'ny fitakiana ara-drariny amin'ny mpanjifa. Misy ihany koa loza mety hitranga eo amin'ny fandraharahana amin'ny orinasa mandray anjara amin'ny fizarana angona. Andramo alaina sary an-tsaina ny mety ho fihetsiky ny vahoaka raha toa ka tafiditra ao amin'ny tetikasam-pampianaran'ny oniversite ny Google-n'ny fikarohana manokana. Ny fiatrehana ny angon-drakitra toy izany dia mety mety ho fisian'ny loza mety ho an'ny orinasa. Noho izany ireo orinasa goavam-be sy orinasa goavana indrindra dia manjavozavo ny fizarana data miaraka amin'ireo mpikaroka.
Raha ny marina, saika ny olon-drehetra afaka manana fahafahana miditra amin'ny angon-drakitra betsaka dia mahalala ny tantaran'i Abdur Chowdhury. Tamin'ny taona 2006, fony izy nitarika ny fikarohana tao AOL, dia navotsotra tany amin'ny fokontany fikarohana izay heveriny fa fangatahana fanadihadiana tsy fantatra anarana avy amin'ireo mpampiasa AOL 650,000. Araka ny azoko ambara, ny Chowdhury sy ireo mpikaroka ao amin'ny AOL dia nanana fikasana tsara, ary nihevitra izy ireo fa tsy nanonona ny angon-drakitra. Saingy diso izy ireo. Vetivety dia tsikaritry ny mpikaroka fa tsy toy ny anarana tsy fantatra ny angona, ary ny mpanao gazety avy ao amin'ny New York Times dia nahay namantatra olona iray tao amin'ny daty niaraka tamin'ny mora (Barbaro and Zeller 2006) . Rehefa hita ireo olana ireo, dia nesorin'i Chowdhury ny angona avy amin'ny tranokalan'ny AOL, saingy tara loatra. Naverina naverina tamin'ny tranonkala hafa ireo angona ireo, ary mety mbola hisy izany rehefa mamaky ity boky ity ianao. Navoaka ny Chowdhury, ary nametra-pialana ny lehiben'ny teknolojian'ny AOL (Hafner 2006) . Araka ny asehon'ity ohatra ity, ny tombotsoa ho an'ny olona manokana ao anaty orinasa hanamora ny fidirana ny data dia kely ary kely ny tranga ratsy indrindra.
Ny mpikaroka anefa dia afaka mahazo ny fampahalalana indraindray indraindray izay tsy azo ekena amin'ny vahoaka. Ny governemanta sasany dia manana fepetra azon'ny mpikaroka atao mba hampiharana ny fahazoana miditra, ary toy ireo ohatra taty aoriana ao amin'ity fampisehoana ity dia afaka mahazo fahazoana mivezivezy amin'ny angona momba ny orinasa ny mpikaroka indraindray. Ohatra, Einav et al. (2015) niara-niasa tamin'ny mpikaroka iray tao amin'ny Ebay mba handefa liana amin'ny aterineto. Hiresaka bebe kokoa momba ny fikarohana natao avy amin'ity fiaraha-miasa ity aho taty aoriana tao amin'ny toko, fa izao kosa aho dia manonona azy izao satria nanana ny zava-bita efatra hitako amin'ny fiaraha-miombon'antoka mahomby: ny fahalianan'ny mpikaroka, ny fahaizan'ny mpikaroka, ny fahalianan'ny orinasa, ary ny fahaiza-manao . Nahita fiaraha-miasa marobe aho tsy nahomby satria na ny mpikaroka na ny mpiara-miasa - na ny orinasa na ny governemanta - dia tsy nanana na dia iray amin'ireo fitaovana ireo.
Na dia afaka mamolavola fiaraha-miasa amin'ny orinasa iray aza ianao na mahazo fahazoana fidirana amin'ny angon-drakitra momba ny governemanta, dia misy ihany koa ireo sakana ho anao. Voalohany, mety tsy ho afaka hizara ny angona misy anao amin'ny mpikaroka hafa ianao, izany hoe ny mpikaroka hafa dia tsy afaka manamarina sy manitatra ny valiny. Faharoa, ny fanontaniana azonao anontaniana dia mety voafetra; Ny orinasa dia tsy azo atao ny mamela ny fikarohana mety hahatonga azy ireo ho ratsy. Farany, ireo fiaraha-miombon'antoka ireo dia afaka mamorona farafaharatsiny ny endriky ny fifandonana mahaliana, izay mety hiheveran'ny olona fa ny vokatrao dia nisy fiantraikany tamin'ny fiaraha-miasa. Ireo rehetra ireo dia mety hotsaraina, fa zava-dehibe ny hahitana mazava tsara fa ny asa miaraka amin'ny angon-drakitra tsy azon'ny olon-drehetra dia samy manana ny andaniny sy ny ankilany.
Raha fintinina, betsaka ny angon-drakitra maro tsy azo idirana amin'ny mpikaroka. Misy lalàna saro-bidy, fandraharahàna ary sakana ara-batana izay misakana ny fidirana amin'ny alàlan'ny serivisy, ary tsy hivoatra ireny barazy ireny satria manatsara ny teknolojia satria tsy sakana ara-teknika. Ny governemanta nasionaly sasany dia nametraka fomba fandrakofam-pahalalana momba ny angon-drakitra ho an'ny angona sasany, saingy ny adihevitra dia indrindra indrindra ny adihevitra amin'ny fanjakana sy eo an-toerana. Ankoatra izany, ny mpikaroka dia afaka miara-miasa amin'ny orinasa hahazoana fidirana amin'ny data, saingy afaka mamorona olana maro ho an'ny mpikaroka sy orinasa izany.